Mae for Android
Rated 4.54/5 (157) — Free Android application by MMAUG
Ultimate guide to coming 2015 general election. Learn about parties, compare candidates and get in-depth coverage on how, where and when you can vote.
Special feature: worry your vote will not be valid? Practice with our app.
၂၀၁၅အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လမ်းညွှန်။ ပါတီများအား လေ့လာနိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား နှိုင်းယှဉ်နိုင်ခြင်း နှင့် မဲဆန္ဒရှင်များ သိသင့်သိထိုက်သည်များ အားလုံးပါဝင်သည်။
- မဲစာရင်းတွင် ပါမပါ စစ်ဆေးခြင်း၊
- မဲပေးရမည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန်အား သတိပေးခြင်း
- မဲဆန္ဒနယ်အတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား လေ့လာနိုင်ခြင်း
- အမတ်ဖြစ်ဖူးခဲ့ပါက ယခင် သက်တမ်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
- ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား နှိင်းယှဉ်နိုင်ခြင်း
- မဲပေးရာတွင် လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်ဆင့် နှင့် တံဆိပ်တုံနှိပ် မဲပေးခြင်းအား လေ့ကျင့်နိုင်ခြင်း
- မဲပေးပြီ:ပါက လူမှုကွန်ရက်များတွင် မိမိပေးခဲ့သော ပါတီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား မျှဝေနိုင်ခြင်း
၂၀၁၅အထှထှေရှေေးကောကျပှဲအတှကျ ပွီးပွညျ့စုံသော လမျးညှနျ။ ပါတီမြားအား လလေ့ာနိုငျခွငျး၊ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအား နှိုငျးယှဥျနိုငျခွငျး နှငျ့ မဲဆန်ဒရှငျမြား သိသငျ့သိထိုကျသညျမြား အားလုံးပါဝငျသညျ။
- မဲစာရငျးတှငျ ပါမပါ စဈဆေးခွငျး၊
- မဲပေးရမညျ့ နရေ့ကျနှငျ့အခြိနျအား သတိပေးခွငျး
- မဲဆန်ဒနယျအတှကျ ဝငျရောကျယှဥျသညျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအား လလေ့ာနိုငျခွငျး
- အမတျဖွဈဖူးခဲ့ပါက ယခငျ သကျတမျးလုပျဆောငျခကျြမြားကို ကွညျ့ရှုနိုငျခွငျး
- ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအား နှိငျးယှဥျနိုငျခွငျး
- မဲပေးရာတှငျ လုပျဆောငျရမညျ့အဆငျ့ဆငျ့ နှငျ့ တံဆိပျတုံနှိပျ မဲပေးခွငျးအား လကေ့ငျြ့နိုငျခွငျး
- မဲပေးပွီ:ပါက လူမှုကှနျရကျမြားတှငျ မိမိပေးခဲ့သော ပါတီနှငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးအား မြှဝနေိုငျခွငျး
Download and install Mae version 1.1.1 on your Android device!
Android package: org.mmaug.mae, download Mae.apk
ကိုယ်မဲပေးမယ့်သူကို ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာချထားပြီးရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။
☞ ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးတန်မဲတစ်ပြား မဆုံးရှုံး မနစ်နာဖို့၊ တံဆိပ်တုံး အစမ်းထုပြီး လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ ★ ဖွင့်ဖွင့်ချင်း ရှေ့ဆုံး စာမျက်နှာမှာပဲ "ဘယ်လိုမဲက ခိုင်လုံမဲလဲ" ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီး လေ့ကျင့်နိုင်ပါပြီ။ ★
☞ အမတ်လောင်းတွေကို စိတ်ကြိုက် ရှာချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူများအတွက်၊ ရှာဖွေနိုင်အောင် ထည့်ပေးထားပါတယ်။
What are users saying about Mae
u r using ur time for ur country
Great app! Cheer! Some myanmar text at home screen's banner not properly display n back nav button of actionbar on "About Mae" screen not work.
It is crafted greatly . But , it's still crashing on Marshmallow.
Great app. Love it !!
As far as I know, the pooling station closing time is 4:00pm. But the app shows 6:00pm. Please update urgently since it could make voters take wrong timing. Other than that, this is nice app and I like the stamping test feature for valid and invalid stamping.
Thank you for ur app
It would be great if the names were deep linked. Eg. Clicking on party leader name would show his bio and etc.
I dont know why by the app is not starting in my phone
Yway — Tech Fun MyanmarFree App
mVoter 2017 — PopStackFree App
Tara Vote — Tara Aung Co., Ltd.Free App
Zay Hnone — MMHashFree App